Kedu ihe ipigide na-eme n'azụ azụ? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Clutch rear derailleur - usoro kachasị
Clutch rear derailleur - usoro kachasị
Kedu ihe ipigide na-eme n'azụ azụ?
Ihe 'ipigide'atụmatụ na-eme ka esemokwu dị naderailleurn'oge mmeghari ya. N'elu ala siri ike, ịdị arọ nke agbụ nwere ike ime kaazụ derailleuribiaghachi na ịkwaga, na-eduga na olu mkpọtụ na ohere ọ nwere ike ịdakwasị ihe olu ahụ kpamkpam.
Nabata ka ịjụ GMBN Tech, nke a bụ ihe ngosi 31 anyị ebe anyị nwere ike ịza ajụjụ gị gbasara teknụzụ igwe kwụ otu ebe. Ajụjụ ọ bụla ị nwere, tinye ha na ihe ndị dị n'okpuru isiokwu a ma ọ bụ ziga ha na adreesị ozi-e na ala nke ihuenyo ahụ, ebe ahụ, echefula iji akara hashtag #AskGMBNTech ka anyị wee nwee ike ịza ajụjụ gị. GMBN Tech, enwere m nsogbu na pedal m niile, ha na-aga n'ihu. M tinye griiz na eri mana ọ naghị arụ ọrụ.
Azụla m ọtụtụ pedal nwere nsogbu creak. Atụmatụ ọ bụla? Ihe mbụ m chere bụ na ọ bụghị ụkwụ ụkwụ. Ọ bụrụ na ọ na - eme pedal gị niile ọ nwere ike ịbụ ihe ọzọ na igwe kwụ otu ebe gị ma ọ bụ na akpụkpọ ụkwụ gị.
Yabụ, nke mbụ, ị na-eji pedal na-enweghị ntụpọ? Gbanye ha na pedal gị? Ọ bụrụ otu a, mgbe ahụ, ọ nwere ike ịbụ obere mkpoko. O nwere ike ịbụ ihe nkedo na-eme ka ọ bụrụ nke na-eme ka ọkpụkpụ ahụ dị na pedal. Ọ bara uru ịlele.
Ma n'ezie cranks gị. Ma mgbe ahụ ihe ọ bụla soro ya Ya mere, ihe ị chere nwere ike ịbụ pedals, ọ nwere ike ịbụ akụkụ nke akụkụ ahụ gearbox n'ihi na ọ na-ebu ibu niile, torque niile na-agafe ebe ahụ. Ya mere, lelee ihe nkedo gị dị na ala axles, yabụ na-abụkarị millimita asatọ.
Mgbe ụfọdụ, ọ dị mma na oge ụfọdụ ọ ga-ekpebi ụdị akara ị nwere, gbaa mbọ hụ na iko gị BB dị, jide n'aka na ọ naghị eme achịcha BB n'onwe ya, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmara maka ya, anyị 'ga-agbakwunye njikọ na nkọwa dị n'okpuru isiokwu a ka ị mụta otu esi etinye aka brackets nwere ike imepụta oge na otu esi akwụsị ya mgbe ọ dị, ma lelee ihe nkedo gị. Are na-abụkarị onye asọmpi. Ọbụna ma ọ bụrụ na ha nwere ntakịrị ntakịrị ma ọ bụ nwee ụdị unyi na na n'etiti eri ha ga-esi na ya wee chọọ ka ị chọpụta ihe ndị a niile ma nwee olile anya na ị nwere ike ịchọta azịza ha.
Jisie ike! Nkwụsịtụ ndụdụ? Eeh. Ọ dị oke mkpa, ịnwere ike iji ha, mana ahapụla ha na stanchions, nke ahụ bụ ọkpọkọ igwe kwụ otu ebe gị. Ma nke ahụ bụ n'ihi na ha nwere a siri ike siri ike ihe nke nwere ike n'ezie-ete ma ọ bụ ọkọ n'elu.
Ya mere ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe ịchọrọ ịme, nwalee obere usoro a, ọ dịkwa mma n'ihi na ọ ga-azọpụta gị kilogram ole na ole. Dị ka ọ dị, nke a bụ otu ị ga - esi kegide eriri zip ahụ, mee ya n'ụzọ ziri ezi, wee eleghị anya belata njedebe. Mezie slack gị, enwere ike nyochaa ya mgbe ị na-anya ụgbọ ala, mgbe ahụ ị ga-echegbu onwe gị maka igbutu akwa zip.
Ugbu a, n'ezie, stanchions nke ọ bụla nkwusioru ndụdụ nwere ike ọkọ nnọọ mfe, n'ihi ya, i kwesịrị ịkpachara anya mgbe ị na-ebipụ ha. Yabụ echiche ka mma bụ ịtụgharị mkpọchi ahụ ma dọghachite ya, na-adọta ya nke ọma ka ọ ghara ịbanye n'ime otu ụzọ ị ga-esi chọta ụzọ ị ga-esi zoo ebe a. Lelee slack gị na mgbe ị gachara, ị ga - enwe ike belata ya ma jiri ya mee ihe ọzọ.
Yabụ ihe ngwọta ka mma maka ịla n'iyi eriri zip, ị gaghị egbusi eriri gị n'ihi na ị nwere ike wepụ ya. Na na na, ọzọ ọ bụ ihe banyere impeller, kpọmkwem ewu impellers. Ndewo Doddy, achọrọ m iwulite wiil ọhụrụ ma ana m eche ihe dị iche na etiti abụọ, obe, obe, eriri aka nke anọ, ọkachasị na isi ike.
M na-na na-eji atọ cross, ma eleghị anya, na-eche nke abụọ n'ihi na spokes bụ a obere mkpumkpu na ike gbatịa obere. Daalụ n'ọdịnihu. Ọ dị mma, ya mere, e nwere ụzọ dị iche iche isi rụọ wiil.
Ihe anọ a na-ahụkarị bụ radial, abụọ, atọ, na usoro obe. N'ihe ngosi, o doro anya na okwu ahụ na-aga n'ihu site na mpempe akwụkwọ ahụ, ndị agbapụ na-amasịkwa rim. Mgbe ahụ ị ga-esi nweta obe abụọ ebe ekwuru okwu obe ugboro abụọ wee họrọ nhọrọ atọ na anọ.
Obe mbu bu nke kachasi ike ma ha mebere onodu kariri nihi na onu ogugu yituru otutu. Ma ha nwere ogologo spokes n'ihi ya, ọ na-akawanye ntakịrị. Ọ dịkwa ntakịrị nhịahụ iwu, yabụ obe ụzọ atọ bụ nke kachasị mma.
Ọ dị mfe iwu, ọnụ ndị ahụ dị mkpụmkpụ, ha siri ike, bụrụ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi, ọ ga-abụkwa ụdị ịnyịnya ígwè a na-ahụkarị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nweta ebe a na-ahụkarị, ka anyị kwuo Hope Chris Kings, agbago ụfọdụ amaghị m, Maverick rim ma ọ bụ ENVE rim ma ọ bụ ihe ọ bụla. I nwekwara ike ime obe abuo. A naghị ahụ ya nke ọma na wiilị igwe kwụ otu ebe, belụsọ na wiil ndị eji eme ya.
Anyị ga-anọ na nke abụọ. Otu ihe ọghọm nke ọdịnala ọdịnala, obe-obe, obe-atọ, wdg bụ na n'elu mgbanaka mgbanaka, yabụ ị nwere ike ịhụ gia ịgbanwe ụdị ugbu a n'ihi na ị nwere ihe dịka 157 na 148 ụzọ na azụ.
N'elu mgbanaka mgbanaka na-ekwu okwu ọdịnala nke ga-eji J-gbagọrọ agbagọ wee jikọta ya na eziokwu ahụ na ọ ga-ehulata isi na mgbe ahụ mgbe ọ gafere ndị ọzọ, ọ na-ebute nsogbu ndị ọzọ na wiil ahụ, n'ihi na ọnụ ndị ahụ bụ n'ezie ibu, na-eduga ná nkwụsịtụ n'ikpeazụ. Ya mere ọ bụrụ na ị hụ ụdị dị ka Maverick na azụ n'akụkụ na-emepe emepe wiil na otutu ihe nakawa etu esi, dị ka Radial na abụọ Cross, na-ibu ka a kacha nta, na-isi ike elu. N'ihi na ị chere na igwe kwụ otu ebe n'onwe ya ga-eme ọtụtụ ihe.
Ọ ghaghị ịnagide ikike niile na-agbagọ nke ndụ kwa ụbọchị, ị maara, nke nwere ike ịtọ igwe kwụ otu ebe gị n'ọkụ. Echefula na hubs si (ntamu) akụkụ nke ihe owuwu nke igwe kwụ otu ebe. Mgbe ahụ, ha ga - anagide osooso na braking, nke a na - eme n'ụzọ dị iche iche na hubs.
Enwere ala mmụọ nke ọtụtụ ime, yabụ ọ dị ezigbo mkpa ka ịhọrọ nhọrọ dị mma maka gị. Ha gafere ugboro abụọ, n'ezie ndị na-ekwuchitere mkpumkpu ọzọ, na n'ihi na ha anaghị agabiga ọtụtụ, ha esighi ike na wiilị. Yabụ ị nwere ike ịbụ ọmarịcha ihe dịka obe-obodo, mana ọ bụrụ na ọ masịrị gị ịtụgharị obere igwe gị, enwere ike ịgafe obe ga-aka gị mma.
Ah, nke ahụ dị mma. Nke a sitere na Wade Cox. Doddy, achọrọ m ịhụ otu esi eme ka taya taya dị ọnụ ala dị ka Cushcore, Vittoria Air Liner, wdg.
Achọrọ m otu, mana ha dị oke ọnụ. M na-eche echiche banyere ụdị ụfọdụ nke anataghị ikike isiokwu. N'ezie, Neil nọrọ ebe ahụ ụbọchị ọzọ n'ihi na ọ na-anya Enduro World Series ikpeazụ na Finale Ligure.
Enwere m olile anya na m ga-eso ya mee ụfọdụ tweaking na igwe kwụ otu ebe. Na anyị kwuru banyere otú anyị kwesịrị ịgbanwe ya wiil. Anyị ga-edozi enweghị ike, n'ezie, ma na-elele ọtụtụ nhọrọ adịghị mma, dị ka Cushcore.
Ma n'ezie enwere ọtụtụ n'ahịa, yabụ echere m na anyị ga-akpọ ụfọdụ n'ime ha ka anyị wee mee nyocha nke aka anyị wee hụ ihe na-arụ ọrụ, mana echekwara m na ọ bụ nnukwu echiche nye anyị, otu Mee ewu n'onwe gị. Amaara m na Tom na-arụ ọrụ na mgbasa ozi anyị nwere ndị enyi ole na ole na-emepe usoro nke aka ha ka m wee gwa ha okwu wee hụ otu ha siri mee ya, echekwara m na anyị nwere ike ịde ezigbo akụkọ .OK, nke ahụ dị mma .
Ya mere, enwere m mkpọtụ na ntị m ma ọ bụ ndụdụ m mgbe m na-atụgharị ogwe ndị ahụ iji mee egwu ma ọ bụ gbagoo n'akụkụ ahụ. N'ihi ya, m tinyere agbụrụ Newcrown na agba nke zuru ezu, enweghị mgbanwe. Agbanyere m ndụdụ ahụ maka igwe kwụ otu ebe ọzọ, gbanye taya ahụ, site na axle, mkpọtụ ka dị.
Steer ahụ nwere obere akara nke ejiji, mana ọ nweghị egwuregwu a ga-enwe na isi. You nwere echiche ọbụla ebe mkpọtụ dị na ndụdụ na-abịa? Daalụ maka enyemaka. Naanị nke mbụ, iji doo anya, ị na-ekwu na ị na-etinye ndụdụ ahụ n'ụgbọala ọzọ, nke ahụ ọ pụtara na ị nwalela ndụdụ ahụ na igwe kwụ otu ebe, ma ọ bụ na ị nwetara ọzọ ị wepụrụ ya na ndụdụ ọzọ dị na igwe gị ọ? ma ọ bụrụ na ọ ka na-akụ? Ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu banyere ndụdụ ahụ na mbụ na gị igwe kwụ otu ebe creaking, na mgbe ahụ ị na-etinye ya na ọzọ igwe kwụ otu ebe ọ creaked, ọ bụ n'ụzọ doro anya na ndụdụ onwe ya.
Ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ bụ gị etiti, ma ọ bụrụ na ọ bụ ụba, o nwere ike ịbụ ekweisi iko na etiti, na nke a kụtuo eku, hichaa ya, jide n'aka na eku enweghị (ntamu) ma ọ bụ cracks. Hichaa ya ma degharịa nke ahụ, tinyeghachi ndụdụ gị, na-atụ anya na ọ bụ azịza ya. Ọ nwere ike ịbụ mgbape na etiti.
Achọghị m ịkpọtara gị ozi ọjọọ ahụ. Mgbe ọ bụla ị na-asa gị igwe kwụ otu ebe, m na-adụ ndị mmadụ ọdụ mgbe niile ka ha gafere ya n'ụzọ ụfọdụ ọ ga - eme ka ọ bụrụ na ị na - enyocha ụdị nsogbu nrụgide n'akụkụ isi tube nke bụ otu n'ime ebe ndị ahụ. Ma na nke gị, ihe m chere na ọ bụrụ na m gụọ ya n'ụzọ ziri ezi, ndụdụ ahụ na-agba agba mgbe ị na-etinye ya na igwe kwụ otu ebe ọzọ.
Anyị gbanwere iko isi, ị gbanwere bearings yabụ ị mere ihe ndị ọzọ niile. N’ebe m nọ, ọ na-ada ka ọ nwere ike ịbụ ihe na-eme ka okpu nke na-akwọ ụgbọ mmiri n’isi. Ọ bụ ezie na nke a abụghị ihe a na-ahụkarị, enwere m nke a na ndụdụ ole na ole gara aga.
litespeed t1 nyochaa
Ọ bụ naanị chi ọjọọ mgbe ọ mere. Ọ ga-abụ ihe mere na ụlọ ọrụ mmepụta ihe mgbe ọ ibido pinned na dị nnọọ atọpụ elu a bit. Ugbu a, amaghị m ma ọ bụrụ na ị nwere nnukwu mmiri ma ọ bụ ndụdụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ndụdụ gị bụ, ịgaghị iji akọ kwuo ya ebe a kama nweta nọmba akara ebe ahụ wee gaa ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe gị ma lee ma ọ nwere ozi echetara site na site n’oge ruo n’oge ha nwere ike ịdụ gị ọdụ.
Mana echere m na nke ahụ bụ n'ihi na enweghi ọtụtụ ihe ndị ọzọ gbasara ndụdụ nkwusioru nke na-ada dị ka ị kwuru banyere ịlele axle na ihe? Ọ dị n'ụzọ nkịtị. Ya mere gafee mkpịsị aka gị, nke a bụ nsogbu gị ma ị nwere ike idozi ya, ma nwee olile anya na ọ bụghị mgbape na etiti ahụ. Street Hawkerz chọrọ ịma ma ọ dị mma iji mmanụ ọkụ si chainsaw nna ya, nke, n'agbanyeghị, ọ meelarị ịhicha ya.
Ọ dị mma, Street Hawkerz, ee, ị nwere ike iji mmanụ ụgbọ ala ma ọ bụ manu oku ma ọ bụrụhaala na i jiri nke ahụ ma ọ bụghị mmanụ strok abụọ site na chainsaw, mmanụ ọkụ abụọ, enweghị m ike iche nke ọma, ọ ga-emerụ agbụ gị. Mmanụ ọkụ n'onwe ya, ee, ị nwere ike iji ya mee ka ihe ahụ dị ọcha. Ọ gaghị adị irè dị ka L na L degreasers ma ọ bụ ụfọdụ ihe nhicha, ma ị nwere ike.
Ọ baghị uru ikwu, alụlụ dị ọkụ na-ere ọkụ, ọ bụghịkwa ezigbo ihe iji sarkar nwere sel nwere ya. Yabụ ọkacha mma, mana ee, ị nwere ike. O doro anya na ị gosipụtara nke ahụ.
Ọ bụrụ na ị nọgide na-eji ha, dị nnọọ hụ na gị yinye bụ kpamkpam dị ọcha na akọrọ e mesịa, ma eleghị anya, na-asa ya anya na a obere mmiri, na-ehichapụ ya n'ihi na ị na-achọghị ihe ọ bụla fọdụrụ na mgbe ị na-etinye mmanụ gị yinye njikọ . Ihe niile bụ na mgbe ị na-etinye mmanụ yinye ya, ọ kwesịrị ịbanye n'ime rollers na mkpọ nke agbụ ahụ iji rụọ ọrụ ya nke ọma. Ya mere, gbaa mbọ hụ na ọ dị ọcha kpamkpam.
Ọzọ na-abịa site na Beto AG. Doddy, nnukwu ihe ngosi. M na-egburu ya ka ọ dọpụta mpụta ihe na 2018 Canyon CF Lux 7.0. (whistles) ọmarịcha igwe kwụ otu ebe, dude.
Hụ ụlọ ahụ n'anya, belụsọ ma eleghị anya njikwa ahụ na-agbanwe. Echiche ọ bụla banyere ya? Enwere m ike ị nweta mwepu ego ma ọ bụrụ na m mee ka ha mata na ị zitere m? Kedu ihe ị ga - emezi na igwe kwụ otu ebe na - abụghị post dobe? Nwere ike ịnwale mwepu ego. Ekwenyesiri m ike na ọ gaghị arụ ọrụ n'ihi na m na-anwale ya n'onwe m maka afọ, mana maka mmelite igwe kwụ otu ebe, m ga-enyocha onwe gị nke pụrụ iche ebe ahụ.
Ọ dị ezigbo mma. M ga-gbanye taya azụ, enwetaghị akara ngosi ahụ niile nke ọma, ọ bụ nke XE nke profaịlụ dị ala karịa m. M ga-eji ọkpọ ihu ahụ, Ardent, n'azụ, m ga-enwetakwa ihe na-eme ihe ike n'ihu, mana nke ahụ bụ naanị m, ị maara? Nke ahụ emetụtaghị mmadụ niile nọ ebe ahụ.
Ọ ga-abụ na m ga-etinyekwa aka sara mbara sara mbara, na-ele ya anya. Ha mara oke warara ebe ahụ, ọbụlagodi na amaara m na ọ bụ igwe kwụ otu ebe XE, m ka na-achọ aka dị obosara. Ọ bụ maka ihe dabara adaba pụtara ihe dị mma, ọ bụghị etu ọgba tum tum ga-adị ma ọ bụ otu esi achọ ịghọta.
Banyere aka mgbanwe, M n'ezie n'ezie na-amasị ya. Ha dị ntakịrị egwu, na ijigharị mgbanwe gbanwere na-adị njọ ma ọ bụrụ na ị chee ụdị aha a na-adịbu, ma ọ bụ ihe akpọrọ ha, abụghị Grip Shift, tinye ya n'ụzọ ahụ. Mana ijigide mgbanwe dị ezigbo mma ugbu a.
Hụrụ ya na otutu XE igwe kwụ otu ebe nke ọma, ọ bụ nnukwu ọkụ n'ihi na enwere ihu abụọ dị na ya na sistemụ mmiri n'ime ya. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma. M na-agba gị ume ka ị nwalee ya ma hụ otu ị si enweta ya.
Ọtụtụ ndị mmadụ anaghị enwe mmasị na ya, ọ dabere na etu esi etinye aka gị na aka. M na-etinye aka m nri na mpụga nke ejiri aka agbanyeghị. Ana m adọta breeki levers n'ezie.
M ga-agbanye ihe dị ka nke ahụ? Ma ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-agba ịnyịnya ahụ na-enwe mmasị iji aka gị kpaa aka, ị nwere ike ịgaghị enwe ike ịme ya n'ihi na ọ bụrụ na ị gafee ala siri ike, ị nwere ike ịgbanwe gia na mberede. Ma gbalịa gbalịa. Ha na-elekwa anya nke ọma na njikwa aka na-enweghị akụkụ ndị ọzọ na-agbadata na eriri ndị ọzọ.
Super dị ọcha ma dozie, jide n'aka na ị ga-anwale ha. Ndewo Doddy, biko ị nwere ike ịkọwa etu derailleur si arụ ọrụ? Na otu o si arụ ọrụ, maka na nkem anaghị adị ka ọ na - eme ihe ọbụla ma ọ gbanye ma gbanyụọ. Ee, enwere m ike ime nke ahụ.
Ọ dị ezigbo mfe. Ọ bụ n'ụzọ dị nkenke esemokwu dị n'akụkụ dị mkpa nke obere ụlọ. N'ezie, enwere igwe kwụ otu ebe n'akụkụ igwefoto - a ga m enweta ya ma gosi gị.
Okay so I have Enweghị m nke m igwe kwụ otu ebe ebe a iji gosi gị n'ihi na igwe kwụ otu ebe m abụọ nwere SRAM n'oge ma igwe kwụ otu ebe a nwere Shimano n'azụ derailleur. Dị ka ị pụrụ ịhụ n’ebe a, ọ nwere ipigide dị na ọnọdụ ‘on’. na okpuru ala di na onodu ‘off’.
Ma maka okwu ahụ, enwere esemokwu na akụkụ nke derailleur ahụ ị na-agbadata isi okwu ahụ.
Yabụ mgbe ị tinyere njigide ahụ, ịtụgharị ya na-esiri gị ike karị. Ugbu a, m ga-egosi gị nke a dị mfe maka gị ilekọta obere. Ọ bụ otu usoro ahụ maka onye ọ bụla n'ahịa, n'agbanyeghị na ha nwere ike ịdịtụ iche na mpụga.
O doro anya na nke a bụ ezigbo njedebe njedebe, nke a bụ Shimano Saintdownhill derailleur. Shdị Shimano niile nwere lever. Fọdụ ga-acha ntụ ntụ na agba, ụfọdụ ga-abụ oji ma mgbe ụfọdụ ụfọdụ n’ọdịdị dị elu dị ka nke a ga-abụ ọla edo.
Ya mere, nwee ndidi, a ga m ewepụ kposara ndị a. Ya mere ga n'ihu, mkpuchi mkpuchi ahụ apụla ma ị nwere ike ịhụ, nke ahụ bụ ebe ị hụrụ isi ihe dị mkpa. Nke a bụ na ipigide anya otú ị pụrụ n'ezie ịhụ na ọ na-akpali ndị derailleur onwe ya ka m na-akpali onu n'ihu.
Ugbu a rịba ama na ọ gbadoro anya na mpụga ebe ahụ, ọ dịkwa n'ụzọ nkịtị - mgbe m tinyere mabụba ya, ọ na-emechi ya ịgbakwunye esemokwu na ya, na-eme ka o sie ike karị. Mana ị nwere ike ịgbanye ụdị ihe ahụ site na ịgbatịkwu ya ma hụ na ọ dị ka nke a. Gbaa mbọ hụ na nsogbu adịghị.
Agbanyeghị, ha dị mfe. Nke a bụ otú ha si arụ ọrụ. Iji mechie ihe ngosi a n'izu a, enwere ozi pụrụ iche dị mma na izu ole na ole, anyị nwere ọbịa na aha ya, Calvin, na-abịakwute m, ọ bụ Mr.
Ogige. Ọ bụ nwoke ahụ nwere nnukwu afụ ọnụ ị hụrụ na nkuzi nkuzi ParkTool niile. Nwoke a maara ihe niile gbasara ngwaọrụ igwe.
Na n'ezie anyị ga-eme pụrụ iche Jụọ GMBN Tech na Calvin. Ya mere nweta ajụjụ gị niile maka Calvin, jiri akara hashtag nke dị na ihuenyo ahụ, #AskCalvin, ma gbaa mbọ jụọ ha. Dee ha na nkwupụta, ziga ha na adreesị na mmalite nke mgbasa ozi ahụ, ihe niile metụtara Berg Bike, ọ ga-ama azịza ya, jụọ onwe gị ajụjụ ndị a.
Maka ederede ole na ole, buru ụzọ pịa ebe a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ XTR Geek Edition anyị ebe m na-ele gearbox niile, otu niile gụnyere brekị, na ụlọ azụ ọhụụ ọhụrụ ahụ, pịa ebe a iji hụ ihe ọzọ. M nwere ike ihu ọma na-agbalị m mbụ e-bike ozi. Yabụ na ọ bụghị teknụzụ n'otu ụzọ ahụ, mana m na-agba ịnyịnya igwe dị oke egwu, Kenevo pụrụ iche, nke ahụ wee pụọ na Steve Jones si EMBN, yabụ lelee ya.
Ọ bụ ihe dị ezigbo mma, ederede dị iche iche. Gosikwa nkwado obere maka ụmụnne anyị EMBN nọ ebe ahụ. Dị ka mgbe niile, pịa ụwa gbara gburugburu ka ịdenye aha na GMBN Tech.
Anyị hụrụ gị n'anya ịnọnyere gị wee hụ na ị gwara ndị enyi gị gbasara anyị ndị chọrọ enyemaka maka idozi igwe kwụ otu ebe ha. Na n'ezie, ọ bụrụ na ị banye n'ime igwe kwụ otu ebe na-amasị gị Calvin si ParkTools, nye anyị mkpịsị aka aka!
Kedu ndị Shimano derailleurs nwere ipigide?
Ọ fọrọ nke nta niile oge a igwe kwụ otu ebederailleurs(naShimano siGRX gravel groupsets, Ultegra RX n'azụ mech, ụzọ otu mgbanaka ụzọ SRAM na eTap AXS 12-speed road rear mechs) gụnyere aipigideigwe.June 29. 2020 g.
Ka m kwesịrị ịgba ịnyịnya na derailleur ipigide ma ọ bụ gbanyụọ?
Ipigidena mgbe niile. Ọ na-ebelata ihe nkedo nke na-enweghị oke mmetụta na-eyi. Inwe aipigidena-enye mma yinye njigide. Enweghị ezigbo ihe kpatara ya iji gbanweejigide.23 jan. Dec 2019
Mgbatị derailleur ọ na-emetụta mgbanwe?
Naipigideike na azụ Shimanoderailleursenwere ike gee ntị, mana Smith na-atụ aro ijigide ntọala ngwaahịa - ma ọ bụ, ọ bụrụ na ihe ọ bụla, na-abawanye ya, ọ bụrụhaala na ọ adịghị njọemetụta ntụgharịma ọ bụ nkwusioru arụmọrụ.23 jan. Dec 2019
Gịnị bụ yinye ụra?
Otu esi akwụsịChain Slap. N’ihe banyere mkpọtụ, nke ị na-agaghị efu bụyinye ụra, gbadata ala obula ike obula ma obu gbanye obula giyinyena-eme ka nri raketịna-ama ụraelu na ala megide swingarm gị.Ọgọst 8 2016
ụmụ anụmanụ na-awakpo
ShimanonaIherema na-emepụta ngwaahịa dị mma, mana ụzọ ha na ụzọ ha si dị iche. Na-ele anya na mpaghara akụrụngwa dị ugbu a, enwere ike ikwu yaShimanobụkarị ihe na-agbanwe agbanwe nke abụọ. N'ime afọ iri gara aga,Ihereagbasowo ihe ike karia ihe ndi ozo.Sep 6 2019
Gịnị kpatara cassettes SRAM ji dị oke ọnụ?
NaCassettes SRAMdị ọkụ karịa n'ihi enweghị ududo na-ejikọta cogs dị iche iche, na obere ọkwọ ụgbọ ala. Ọ bụ ya mere ha ji dịdịkwa oke ọnụ. ma ọ dịkarịa ala ihe kachasị elu (dị ka ugo, ikekwe ụfọdụ n'ime ihe 11spd) arụpụtara site na otu mpempe, ọ bụghịkwa mgbakọ.Mar 13 2017
Ọ bụ Shimano nwere SRAM?
IhereCorporation bụ na nzuzojiderendị na-emepụta igwe kwụ otu ebe na Chicago, USA.Iherebu eburu aha ndi guzobere ya, Scott, Ray, na Sam.Shimano, Inc. bụ onye Japan si mba dị iche iche na-emepụta ihe ndị e ji agba ịnyịnya ígwè, ịkụ azụ, na ịkwọ ụgbọ.
Shimano dị mma karịa SRAM?
Kedu nke ka mma Shimano XT ma ọ bụ SRAM GX?
NaSRAM GXUgo di iche iche bu ihe kwesiri ekwesiShimano si XT, na-enye arụmọrụ yiri nke ahụ na nhọrọ ọsọ ọsọ 12. OnyeGXdịtụ ọnụ ala karịaShimano si XT, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe ọ dị ka, naShimanobụ ma eleghị anya ọmarịcha nhọrọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ikenyeneke mbiet nso nke Kwadobe, naIheremmeri.
Gini mere iji choo ihe ichoro nke azu?
Isi okwu nke njigide ihe bụ ijigide agbụ iji debe ya n'ọnọdụ mgbe ọ na-agabiga ala na-enweghị ntụpọ, na-ewepu ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala na-ebelata 'agbụ' - mgbe agbụ ahụ na-adọkpụ ihe nkedo ahụ, nke nwere ike imebi - na ihe egwu nke agbụ agbụ kpamkpam.
Olee otu ipigide derailleurs si aru oru na Shimano Shadow gbakwunyere?
Site na igbochi ije nke oghere slack na agbụ na-egbochi, na-ebelata ụra na ihe mgbochi agbụ na mberede. Achọpụtara atụmatụ a na 10 na 11 derailleurs ọsọ gụnyere shimano shadow tinyere, ụdị SRAM 2, na ụdị XX1 na X01. Ọ nzuzu na ọ bụ adịghị maka 9 ọsọ.
Enwere ike ịgbanwuo azụ azụ Shimano?
Shimano derailleurs gụnyekwara toggle nke na-enye ndị ọrụ ohere ịgbanye ipigide ma ọ bụ gbanyụọ ya.